Tiro Dad la heystayaal ah oo lagu heysto gudaha dhismaha Westgate Mall oo wali howl galka ka socdo | Salaan Media
Tiro Dad la heystayaal ah oo lagu heysto gudaha dhismaha Westgate Mall oo wali howl galka ka socdo
Tiro dad la heystayaal ah oo aan tiradooda la heyn ayaa lagu heystaa gudaha Xarunta Ganacsiga ee Westgate Mall, iyadoo ciidamada ammaanka ay goor dhoweyd u suura gashay inay dabaqa labaad ay gaaraan.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howl galka dadka faraha badan ku dhinteen ee ka dhacay xarunta ganacsiga ee Westgate, halkaasoo ahaa goob aad casri u ah oo laga dukaameysto oo ay u badan yihiin dadka ajnabiga iyo dadka qaniga reer kenya ah.
Rasaas ayaa laga maqlayaa dhismaha Westgate oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada, warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaa si toos u tabinayay, howl galka ka socday Westgate oo waaga ugu baryay kooxihii weeraray dhismaha.
Waxaa la sheegayaa inay jiraan dad ajnabi ah oo ku dhintay weerarka, muwaadiniin u dhashay Canada iyo Faransiiska ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen, iyadoo dowladda Marekanka ay cadeysay in qaar ka mid ah muwaadiniinteeda ku dhaawacmeen.
Ilaa 39-ruux ayaa ku dhimatay weerarkan oo ay mas’uuliyadeeda sheegteen Al-Shabaab, iyadoo ciidamada Kenya ee ku sugan xarunta ay muddo ka badan 20-saacadood ay la taacalayaan dableyda gudaha ugu jirta dhismaha.
Dowladaha reer Galbeedka ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, dowladaha Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, iyagoo sheegay inay Kenya ka taageerayaan arrimaha la dagaalanka Argagixisada.
Lama oga tirada ay kooxahan yihiin, waxaa la leeyahay waxay gaarayaan tobaneeyo, qaarkood u duubnaa wajiyada, isla markaana ku hubeysan qoryaha AK47 iyo bambooyin, iyadoo la soo warinayo in mid ka mid ah kooxihii weerarka geystay uu si xirfadeysan u baxsaday, markii uu dharka iska soo bedelay, iskuna dhex daray dadkii la bad baadinayay.